Taona 2016 :TSY NISY GADRA POLITIKA -
AccueilRaharaham-pirenenaTaona 2016 :TSY NISY GADRA POLITIKA
28/12/2016 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Mampiavaka ny filoha Hery Rajaonarimampianina amin’ireo filoha teo aloha toa an-dry Rajoelina sy Ravalomanana, dia noho izy tsy mba nanenjika ny tsy mitovy firehana aminy. Tsy mba filoha lian-drà sy tia valifaty ity filoha Hery Rajaonarimampianina ity. Tany amin’ny fanarenana ny fahantrana napetrak’ireo filoha roa nifandimby ireo no nandaniany fotoana hatramin’izao.
Tsy nahitana gadra politika izany mihitsy nandritra ny fotoana nitondrany hatramin’izao 2016 izao. Iny vao nivoaka omaly iny ny didim-pitsarana momba an’ingahy Augustin Andriamananoro. Niaraha-nahalala fa sazy fampitandremana no azony. Ny momba an-dry Alain Ramaroson indray moa dia tsy resaka politika mihitsy no nampigadra azy eny Antanimora fa resaka raharaham-pianakaviany manokana. Ny rahalahany no nitory azy noho ny raharaha adin-tanim-pianakaviana. Tahaka izany koa ny nampidoboka am-ponja ny filohan’ny Hafari Malagasy. Ny mpiray fikambanana taminy ihany no nitory azy ary raharaha manokana tsy misy hidirana politika.
Maro anefa ireo fandikan-dalàna ara-politika toa ny fitaomana olona hidina an-dalambe sy famoriana olona tsy ara-dalàna nataon’ireo mpanao politika saingy hain’ny filoha ankehitriny ny nandamina an’izany. Hay ve ka tsy voatery hampidirina eny Tsiafahy tahaka ny tamin’ny andron-dRavalomanana Marc sy Andry Rajoelina ny mpanao politika tsy mitovy firehana amin’ny mpitondra e ? Lesona lehibe miantefa any amin’ireo mpitondra teo aloha tia managadragadra olona fahatany izany.
Raha tamin’ny andron’izy ireo anefa ireny raharaha Andriamananoro ireny, angamba avy hatrany dia 5 taona tany Tsiafahy. Tapitra hatreo ny ho avy politikan’izany Augustin Andriamananoro izany raha tamin’ny andron’ny fitondrana Ravalomanana. Ny an’io filoha teo aloha io mantsy, dia tsy mahalala afa-tsy Tsiafahy. Sazy famotehana ny ho avin’ny olona iray mihitsy fa tsy sazy fananarana tahaka izao mitranga izao. Tahaka izany no nahazo an-dry Pety Rakotoniaina sy Voninahitsy Jean Eugène. Rehefa tsy nanaraka ny toromarika nomeny dia tany Tsiafahy no nanala sazy henjana. Tsy resahana intsony ny fanagadran-dRavalomanana tompon’andraikitra maro toa ny Tale jeneralin’ny Fid, ny mpiara-dia tamin-dRatsiraka sns…Nitovy tamin’izay koa ny an-dry Rajoelina. Na mbola Tetezamita aza dia maro ireo gadra politika nitondra faisana tamin’izany. Isan’izany ry Kolonely Charles, jeneraly Raoelina, ry Ralitera , ry Raharinaivo…
Miavaka tsara ankehitriny ny mahasamihafa ny filoha Hery Rajaonarimampianina sy ireo filoha roalahy teo aloha Rajoelina sy Ravalomanana. Ny iray tia fihavanana moa iretsy tsy misy afa-tsy hifamaly faty fotsiny. Niezaka nanakorontana faran’izay heriny ry Lylyson sy Doudou mba ho lasa gadra politika saingy tsy nahataitra ny fitondram-panjakana izany. Ny tena nahatsikaiky aza dia ireo olona ireo mihitsy no mihady lavaka hianjerany saingy ny mpitondra indray no manavotra azy. Raha fitondrana lian-drà sy tia “gadragadra” dia efa ela ireny senatera Lylyson sy Doudou ireny no teny Tsiafahy.
Lalatiana Rakotondrazafy : Saika nigadra
Taorian’ny lahatsoratra navoakan’ny orinasa an-gazety tantanin’i Lalatiana Rakotondrazafy ny faha-20 ny volana mey mikasika ny filazana fa “nanorina trano manana rihana sivy ny filohan’ny antenimieran-doholona”, dia nisy ny fitoriana napetraky ny voatonontonona anatin’ io lahatsoratra ...Tohiny